Fahafatesan’ny fiteny : vokatry ny lalànan’ny fivoarana, sa làlam-javaboahary, sa famotehana ? · Global Voices teny Malagasy
Fahafatesan'ny fiteny : vokatry ny lalànan'ny fivoarana, sa làlam-javaboahary, sa famotehana ?
Voadika ny 06 Oktobra 2007 10:48 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, 繁體中文, 简体中文, عربي, Ελληνικά, English
Isika zanak'olombelona dia miaina anivon'ny firenena miisa 194 fotsiny, aleo angaha atao hoe na mihoatra kely na latsaka kely, anefa dia ny fitenintsika dia anelanelan'ny 7'000 sy 8'000 isa.
Mihena an-toerana anefa ireny fiteny maro samihafa ireny. Tombatombanana ho fiteny iray no manjavona isan-tapa-bolana.
Zato taona lasa izay, firenena Erôpeana azo isaina amin'ny ratsan-tànana monja no nanjanaka kôntinanta manontolo ary nandrafitra koa ny fahaleovan-tenan'izy ireny na nanambatra tao anaty firenena iray, tao ambany ziogana fitenin'ny mpanjanaka iombonana, foko maro samihafa. Vondrom-pirenena maro no nanaraka izany koa taty aoriana.
Ary ankehitriny, ny fanatontoloana amin'ny lafiny ara-fampahalalam-baovao sy teknolojika dia vao mainka toa manafaingana ny fizorana ho any amin'ny « fampitoviana » fiteny. Izayn ve anefa dia tokony hanitra antsika ?
I Kans, izay mpiblaogy Kameroney amin'ny fiteny Frantsay ao amin'ny Le Blog du Presi, dia namaly ny lahatsoratra « fiteny iray no manjavona isan-tapa-bolana » [FR] izay diam-penin'i Rue 89.
Notaterin'i Rue 89 ao amin'ny lahatsorany ary fa araka ny nambaran'i Collette Grinevald, izay mpikaroka ara-pitenenana [linguiste] any amin'ny Anjerimanontolon'i Lyon II, ny 90%-n'ny fitenim-paritra dia hanjavona laohan'ny faran'ity taonjato faha-XXI ity. Ankehitriny na aman'arivony aza ireo fiteny, dia 83 monja ireo fiteny no ifaneraseran'ny 80%-n'ny mponina eto an-tany. Manerana izao tontolo izao dia soloin'ny fitenin'ny mpanjanaka tsikelikely ireo fiteny nentin-paharazana.
Ahitana ireo hevi-drehetra ireo hafatra amin'ny teny Frantsay izay napetraky ny mpamaky tao amin'i Rue 89 [tsy mitonona anarana ny ankamaroany], ny sasany manambara fa lalànan'ny zava-boahary ihany ny fanjavonana fiteny, ary tena ilaina aza raha ireo firenena izay mizarazara ho foko maro samihafa no dinihina; ny hafa indray dia manohitra izay heveriny ho toy ny tena fandripahana tsotr'izao.
Ny fiteny dia natao resaka nandritra ny fotoana maharitra tany Frantsa, nohon'ny heri-vaikan'ny fampiasana ireo teny sadasada Anglisy, indrindra ny fiakaran'ny teny Anglisy ho fiteny iraisam-pirenena dia niteraka ahiahy tany an-jorontrano sasany tany.
Tetika ofisialy mihitsy ny anaovana izay hampanjavona ireo fitenim-paritra maro mba ahafahan'ny fitenim-pirenena iombonana iray hitombona. Amin'ireo faritra miteny Frantsay dia izany mihitsy no zava-mitranga.
Fahafatesan'ny fiteny : lalànan'ny fivoarana, sa làlam-javaboahary, sa fandiovana fandripahana ara-poko ?
« C'etait mieux avant… » encore et toujours… c'est fatiguant. J'aime qu'on me parle de l'evolution des choses, pas seulement d'empecher la destruction de ce qui existait… On ne construit plus d'edifices Romans ou Gothiques… Mais on en a garder avec le temps de tres beaux. Le temps a le merite de faire le trie, c'est vrai dans l'art, la culture et la nature…
« Aleoko ihany ny taloha … » dia izany foana no miverimberina … ka efa tena mankaleo ahy mihitsy. Tiako kokoa raha resahina momba ny fivoatry ny tontolo aho, fa tsy ny fiarovana izay zavatra taloha tsy ho rava fotsiny ihany … Tsy misy manorina trano amin'ny fomba Romana sy Gôtika intsony ankehitriny … Ireo taona mandalo anefa dia namela ireo izay sangany ho antsika. Ireo taona mandalo dia manasivana, marina izany na amin'ny kanto, na amin'ny vakoka, na amin'ny zavaboahary.
Hoy i Alzaz, mpamakin'i Rue 89 :
Tsy olana izay fiteny mihen-danja sy manjavona. Satria izany ihany no làlam-javaboahary. Izay matanjaka indrindra no tra-parany eo, mandresy.
I photosieste mpamaky ao amin'i Rue 89 :
Ny famafana ireo foko samihafa dia famotehana ireo vakoka. Azo oharina amin'ny fiainan'olombelonaizay teraka, velona ary avy eo maty ihany izany.
Raha fahafatesana « voajanahary » rehefa vokin'ny fiainana ny azy dia arahaba soa. Raha toa kosa ka ankasimparany ataon'ny hafa, na koa fandavana ny hanampy ny namana tra-doza, dia hafa mihitsy ny raharaha …
Toy izany koa ny momba ireo fiteny rahonan'ny fanjavonana ireo.
Mpamaky hafa :
La mort d'une langue est grave non pas pour ce qu'elle est mais surtout pour ce qu'elle pouvait apporter. Une langue qui disparait emporte avec elle un schème de pensé, une vision du monde qui n'augmente que l'apauvrissement de la culture humaine et de la capacité des hommes à comprendre le monde qui l'entoure.
Tsy ny fahafatesan'ny teny loatra no tena ratsy fa ny fa izay soa mety ho nentiny. Very miaraka aminy ny fanehoana an-tsary, ny fomba fijery izao tontolo izao, ny fomba fisainana; ary tsy mampitombo afatsy ny fahantran'ny kolontsain'olombelona sy ny haavom-pahatakaran'ny olona ny tontolo manodidina azy.
Angamba olana anatin'ny fitenenana ihany izany. Angamba kosa isika tsy handeha hivarilavo raha mitanisa ireo zavatra rehetra nanjavona ka nosoloin-javatra hafa nandritra izay 50'000 taona lasa izay. Fisainana feno fiarovana ny anareo, mpitahiry, kapitalista raha tsorina. Hevero ny famataranandromben'ny fiaraha-monina fa tsy ny halavan'ny fiainan'olombelona. Afaka 500 taona, mbola ho zava-baovao avokoa no hanolo ireto zavatra ireto, dia maninona koa anefa ? Arak'izay zavatra ilaina amin'izany toetr'andro izany, dia inona no olana ? Angamba aza tsy hisy saka intsony eto an-tany, dia ahoan'iza anefa ?
Hoy indray i jean jacques louis mpamakin'i Rue 89 :
« … en biologie, la diversité fait la richesse” : oui mais la biologie ne connaît qu’une seule langue vieille de trois milliards d’années et qui est le code ADN car c’est bien une langue avec un alphabet de quatre lettres et des mots de trois lettres.
« … marina fa amin'ny biolojia, ny hamaron'ny fahasamihafana dia harena » : Eny e, anefa fiteny tokana ihany no mba hany fantatany nandritra izay 3 tapitrisa taona izay dia ny ADN, fiteny mampiasa abidia misy litera efatra sy teny-na litera telo.
Mazava ho azy, raha maty ny fiteny iray iray dia misy hafa vaovao miforona kosa any ho any:
… mba firy ny tahan'isan'ireo fiteny miforonamihoatra amin'ny fiteny iray manjavona ? Mety hahaliana ny hamantatra ireo fiteny vaovao niforona nandritra izay amam-polotaona lasa izay, zara raha mahafeno taonjato vitsivitsy. Ireo fiteny sadasada Kreôla izay fampiasa any amin'ireo nosy maroba, mbetika mifahatra amin'ny teny Anglisy, na amin'ny teny Hollande, na amin'ny teny Frantsay, sy ireo karazany marobe, ny koa ireo fivoaran'ny fiteny Darija izay marobe tokoa any Avaratr'i Afrika … Ohatra fotsiny ny any Marôka, ny Darija izay fitenim-paritra Arabo no tena fiteny iombonana, izay mifahatra amin'ny fiteny Arabo, teny Frantsay, teny Espagnôla anefo koa dia miovaova isam-paritra, ohatra nohon'ny fihaonana amin'ny fiteny Berbera.
Ambaran'i Kans ohatra fa any Kamerona dia hitana fitenim-paritra mihoatry ny roan-jato, anefa kosa fitenim-pirenena roa,dia ny Frantsay sy ny Anglisy. Kanefa ny fiteny « Pidgin English » [hoan'ireo miteny Anglisy] sy ny « Camfranglais » [hoan'ireo miteny Frantsay] « no fiteny mieli-patrana indrindra sy be mpahalala » sady ankifizin'ireto zatovo mipetraka an-tanan-dehibe raha oharina amin'ireo fiteny roa ofisialy na ny fitenim-drazan'ny tsirairay.
Nanome ohatra camfranglais izy, izay fangarona fiteny Anglisy, teny Frantsay sy fitenim-paritra:
Mangidy tsy maintsy sotroina ve ireo fitenin'ny mpanjanaka ?
Maro amin'ireo firenena Afrikana no mampiantrano foko sy fiteny aman-jatony samihafa. Ny fanendrena fiteny vitsy izay hisalovana ireo fitenim-paritra dia làlana tsy maintsy diavina na dia maharary aza, araky ny ambaran'i Kans:
Raha ambara fa diso ny tsy fanaovana ireo fiteny ireo ho ofisialy. Dia tsaraina ny fiteny Anglisy, Frantsay, Espagnôla sns. Ahoana anefa no tokony atao raha mifanisa amin'ny isan'ny olona ny karazam-pitenenana ? Tsy maintsy atao ny safidy,tsy voatery hahafaly satria misy ny teny voafidy voatery hanjavona.
Hoy i Alain Colbert mpamaky an'i Rue 89 :
Raha tsy mahafehy ny fiteny Pôrtogea ny Amerindiana avy any Amazônia, dia tsy ho afaka ny hahalala ny mombamomba izay zony amin'ny maha-teratany Breziliana azy izy, raha mifanatrika amin'ny olona avy amin'ny faritany hafa, na manankarena io na mahantra, izay miteny Pôrtogea hatry ny fahazazany, ary tonga handroba sy handrava ny tontolo iaianan'izay amerindiana izany.
I Kans dia isan'ny mihevitra fa ireo teknolojia vaovao no nanome vahana famahoana ireo fiteny, indrindra ny fironana ho amin'ny fiteny Anglisy :
…Mety ho iharam-pahavoazana noho ny fampitana haitao ny fiteny”ntaolo” (araka ny fiteny mihaja). Jereo ange fa tahaka ny ahoana moa ny figohan'ny teny iray ny setrasetran'ny teny hafa mitondra ny hay (siansa). Ny hitako amin'izany dia ny fiaraha-monina afrikana tsy namorona na ny voromby, na ny fiarakodia, na ny solosaina; jereo fotsiny ny anarana omena omena ireo zavatra ireo dia ho azonao ny tiako lazaina. Tahaka izany ihany koa amin'ny teny frantsay sy teny anglisy, amin'ny teny tahaka ny“car,” “wagon,” “PC,” sns. Dia jereo ihany koa ny figidragidrahan'ireo milaza ny tenany ho mpiaro ny teny frantsay. Manontany tena aho fandrao dia aim-bery maina fotsiny. Fa tarigetra tsara na dia izany aza!
Tamin'ny fanehoana hevitra, nanao aza fady azy ny mpamaky an'i Kan iray, manontany ny fampanavahana ny teny ho ntaolo na mivoatra:
…Aza fady ô! Aza fady indrindra fa tsy misy ny teny ntaolo na teny mivoatra, fa teny natao an-jorombala sy teny nolalaina no misy, Satria manko raha lazainahe teny ntaolo izy dia tahaka ireny hoe tsy afaka mivoatra ireny intsony, nefa raha nokolokoloina kosa izy ireny dia mety ho efa nivoatra tahaka ny hafa ihany koa.
Tahaka ny ahoana re izany izao tontolo izao vitsy kely sisa ny teny velona?
Tahaka ny ahoana re izao tontolo izao raha teny iray sisa no ifampiresahana e? Tsy mba azo antenaiina hifankahazo kokoa ve ny olona, hifampiresaka kokoa ary mety hihavitsy kokoa ny ady ohatra? Tsia dia tsia, araka ny tantara, dia mahita matetika isika fa misy hatrany ny ady na dia eo amin'ny samy mitovy teny aza.
Ho ela velona ny fanatontoloana! Fahalevonan'ny 25% n'ny aina sy ny singa velona maneran-tany, fahalevonan'ny teny velona, fahalotoan'ny tontolo iainana, fihitaran'ny fahantrana amin'ny ankapobeny. Moa ve tsy tsara ny fiainana?
Amin'ny fiarovana ny kolontsaina
Mpamaky nyRue 89,raha naka an'i Frantsa ho ohatra i gemrien dia manoratra fa mety ho faty ny teny saingy sarotra adinoina kosa:
Harem-bakoka ny teny, tahaka ny toerana manan-tantara ihany, fa any amin'ny mandasaditrano ihany ve no hiainantsika sa mbola any amin'ny tranobongo? Ny adidintsika dia ny miaro ny harem-bakoka ary mampita izany amin'ny taranaka mba hahalalany hoe iza izy ary avy aiza, nefa noho izay antony izay ve no tsy maintsy ampiasana amin'ny andavanandro ny tenim-paritra any amin'ny tsirairay?
Ny olana amin'io hevitra io, araka ny notondroin'ny mpamaky ny francophone Rue 89 , any amin'ny faritra hafa eto ambonin'ny tany, dia tsy ny teny andalam-pahafatesana rehetra no alefa aorian'ny toerana manatantara hanamarika ny fisiany:
Raha handray tranga iray fantatro tsara aho, dia ny an'i Afrika, aoka ho fantatra fa latsaky ny 10% – efa nomeko betsaka aza izany – amin'ny fiteny 1,000 misy eto amin'ny kaontinanta (tombana ekena amin'ny ankapobeny) no fantatra ny rafitra. Mbola ampahany kely dia kely amin'ireo no manana raki-tsoratra (ny asan'ny evanjelistra kosa no hany antenaina amin'ny teny hafa). Heverina koa ankehitriny fa ny ampahafolon'ny teny misy ankehitriny sisa no ho velona mandra-pahatapitr'ity taonjato ity. Ho an'ny sisa hafa kosa dia ny Testamenta vaovao nadika sisa no iononana: Mahafinaritra![eso]
Takatrareo ve ny anton'ny fahamehana? Na dia ny teny ifampiresahan'olona an'arivoarivony aza dia ambava-loza: ohatra amin'izany ny gikuyu ao Kenya. Nefa ny firenena dia milamindamina ihany amin'ny resaka politika. Fa manandrama ange mandeha mankany RDC na any amin'ny fanalana vanja milevina any Mozambique!
Ho ahy manokana raha mandray ny fanoharanao aho, tsy te-hiaina anaty mandasaditrano aho. Saingy afaka mitsidika ireny aho raha tiako atao izany, mba ho afaka mandinika ny Tao sy Maritranony ohatra. Amin'ny kaontinanta rehetra dia manjavona tsy nisy niangana ny mandasaditrano, eny tsy hita mbamin'ny fatiny.
Nihaniroborobo tao Frantsa ny fihetsiketsehana hitandroana ny tenim-paritra taorian'ny fanaovana azy an-jorombala nandritra ny taona maro. Na izany aza ny famelombelomanana ny sisa amin'ny tenim-paritra tahaka ny Breton sy ny Corse dia tsy voakasik'izany kosa ny tenim-paritra frantsay ampitan-dranomasina.
Mpamaky ny Rue 89 , Sylvius:
Faritra frantsay tahaka an'i Bretagne i Guyane ary manana fitenim-paritra amazoniana enina (amin'ny teny 15 ifampiresahana any amin'iny faritra iny) saingy mitoka-monina, vitsy an'isa ary tsy mba tia adiady ny Amerindiana any…Moa va tsy hita ao ny fitoviana sy ny firahalahiana tarigetra Frantsay? aza fady fa tsy marina kosa angamba izany ho an'ny fivondronana sy sisitany frantsay ampitan-dranomasina.
NItovy hevitra aminy ny mpamaky iray:
Marina izany. Fa ny tantara dia mametraka ny teny “amzoniana” ho an'ny vitsy an'isa ambava-loza: Ny teny amerindiana any Guyanne Frantsay, dia andala-panadinoana ihany koa. Ny teny Baska (manana gazety, haino aman-jery, fanontana, fampianarana hatramin'ny garabola ka hatrany amin'ny sekoly ambony) kosa etsy ankilan'izany dia azo heverina ho miroborobo fatratra…
Madagasikara : Misedra fanafihana ve ny teny Malagasy ?
Raha ny any Frantsa efa fotoana ela izay, ny politikan'ny governemanta izay nanindrahindra loatra ny teny Frantsay ho fiteny ofisialy dia nitarika ny fahafatesan'ireo fitenim-paritra; ity resantsika ity dia tsy mbola mazava tsara.
I Mialy Andriamananjara izay isan'ny mpanoratra ato amin'ny Global Voices, dia nitatitra fa ny any Madagasikara dia mitovy amin'ny toeran-kafa any Afrika ihany ka politika vonjy tavan'andro no mahamaika azy fa tsy mba « mitsinjo vodiandro merika » akory hany ka manjary manambana mihitsy ny fisian'ireo fiteny tsy-Erôpeana.
Ny governemanta Malagasy dia nanapa-kevitra fa hampitsahatra ny famoahany fampandrenesana na vaovao ofisialy amin'ny alalan'izay gazety tsy mahatratra ny isa 10'000 isan'andro no sady tsy mamoaka amin'ny roa amin'ireo fiteny ofisialy (Malagasy, Frantsay, Anglisy).
Araka ny fijerin'i Jentilisa io fepetra io ny fitondrana Malagasy izay « nandrasana hanirina » ka hanohana ireo gazety miteny Malagasy, no vao mainka koa « nampivandravandra » sy mampiseho ny fanirian'ny governemanta ny hanilikilika ny fitenin-drazana Malagasy.
I Rajiosy, izay Malagasy mpibalogy vaovao kosa dia tsy very fanantenana [FANAMARIHANA: vao tamin'ny 22 Septambra 2007 no nanokatra blaogy i Rajiosy na dia efa ela namakiana blaogy sady mpamela hafatra ombieny ombieny aza izy].
Henjana ianao fa vitanao ilay lahatsoratra lava be e! fa mahagaga ahy ho’aho fa misy vitsivitsy tena fomba fanoratro mihitsy an! 😉
ny anankiray nampihomehy irery ahy koa dia ity. Saiky teo amin’ny lahatsoratra vitako dika ihany koa no vitan’ise dia ilay tsy vitako no tsy vitan’ise! nikisaka kely fotsiny ny ahy dia mba natao bemiray tao ny lahatsoratra! aza fady e!
06 Oktobra 2007, 10:54
> misy vitsivitsy tena fomba fanoratro mihitsy an!
Tsy hita fa angamba noho ny famakiana ny blaoginao dia tafapetraka 😉
Ary faly aho mihintsy aho raha heverinao fa manahaka ny diam-peninao. Ankoatr’izay voninahitra ho ahy no niarahantsika nandika ity lahantsoratra lava iray ity misaotra betsaka amin’ny fiarahamiasa 🙂
No sady mialatsiny miala fondro amin’ny namelana vary mangatsiaka fa ny andro efa alina, izaho koa mbola nisy natao dia voatery navela tao fotsiny.
06 Oktobra 2007, 15:05